မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်: 0nline ဗေဒင်
မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်ပညာဖြင့် အောက်ပါကဏ္ဍများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
(၁) ရင်သွေးနာမည်ပေးခြင်း ….. နှစ်သောင်းကျပ်
(၂) ရင်သွေးမွေးဖွားခြင်း အတွက် မွေးဖွားမည့်ရက်ကို မိဘများကိုယ်တိုင် ရွေးခြယ်နိုင်စေရန် အကျိုးအပြစ် ခွဲခြားပေးခြင်း ……… နှစ်သောင်းကျပ်
(၃) နာမည်ပြောင်းလဲလိုသူများအတွက် တွက်ချက်စစ်ဆေးပေးခြင်း ….နှစ်သောင်းကျပ်
(၄) နာမည်စစ်ဆေးပေးခြင်း နှင့် နာမည်အရ ပြုအပ်သော သဘာဝယတြာပေးခြင်း … နှစ်သောင်းကျပ်
(၅) ဟောစာတမ်းရေးသားပေးခြင်း …. သုံးသောင်းကျပ်
(၆) လုပ်ငန်းနာမည် ရွေးခြယ်ပေးခြင်း သုံးသောင်းကျပ်
အသေးစိတ်ကို အောက်တွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
(၁) ရင်သွေးနာမည်ပေးခြင်း ……. နှစ်သောင်းကျပ်
ရင်သွေးနာမည် ကို မိဘများကိုယ်တိုင်ရွေးခြယ်နိုင်စေရန် အသေးစိတ် တွက်စစ်အကြံပြုပေးပါသည်။ ရင်သွေး ကျား/မ အလိုက် … မှည့်ခေါ်သင့်သော အက္ခရာ ၊ ရှောင်သင့်သော သရများ ၊ ပညတ်သဘာဝ စသည်အားဖြင့် ပြည့်စုံစွာ တွက်စစ်အကြံပြုပေးအပ် ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရင်သွေး၏ မိဘနှစ်ပါး နာမည်
မိဘနှစ်ပါး ၏ မွေးနံ
ကလေးငယ် ဆက်ခံရမည့် ဘာသာတရား
စသည်တို့ကို ပြည့်စုံစွာ ပေးပို့ပြီး မေးမြန်းနိုင်သည်။
မဟာဘုတ်ဗေဒင်ပညာဖြင့် မွေးဖွားမည့် အချိန် မြန်မာကောဇာခုနှစ်အပေါ်မူတည်ပြီး မည့်သည့်နေ့ရက် နေ့နံ ကို ရွေးခြယ်လျှင် မည်သည့်အကျိုးအပြစ် ရှိနိုင်သည် ဟူသည်ကို မိဘများ သိရှိရွေးခြယ် နိုင်စေရန် အကြံပြုပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ရင်သွေး ကျား/မ ခွဲခြား သိပြီး ဖြစ်သူများအတွက် ပိုမို အကျိုးရှိစေပြီး .. ရက်ကို ရွေးခြယ်ယူနိုင်ရန် အသေးစိတ် အကြံပြုပေးပါသည်။
မေးမြန်းလိုသူများ အနေဖြင့် …
မိဘ နှစ်ပါး ၏ နာမည် နှင့် မွေးနံ (ဘာနေ့သားသမီး)
ကလေးငယ် ကျား/မ ခွဲခြားသိပြီးဖြစ်ပါက …..ဖော်ပြပေးပြီး မေးမြန်းနိုင်သည်။
နာမည်ပြောင်းလဲ လိုသူများ အတွက် မိမိတို့မွေးဖွားသည့် မူလမဟာဘုတ်ဇာတာခွင် အရ …တွက်ချက် စစ်ဆေးပေးပြီး ၊ မိမိတို့ရရှိလိုသော အနာဂတ်အကျိုးစီးပွား အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေသော အမည်မျိုး ရနိုင်/မရနိုင် ။ ရနိုင်ပါက မည်သည့်အမည်အမျိုးအစား ရွေးခြယ်သင့်သည် …စသည်တို့ကို အကြံပြုတွက်စစ်ပေးပါသည်။ (ပြောင်းလဲရန် မသင့်သည့်နာမည်ရှင်များ …ကို ပြောင်းလဲနိုင်ရန် မည်သည့်အကြံပြုချက်မျိုးမှ ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ )
မိမိတို့၏ မွေးနေ့ မွေးရက် အပြည့်အစုံ ၊ လူမျိုး ၊ ဘာသာ၊ အသားအရောင် ၊ အရပ် ၊ (ဖြစ်နိုင်ပါက တစ်ကိုယ်လုံးအပြည့် ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ) ၊ လက်ရှိသုံးစွဲနေသော မှတ်ပုံတင် တွင် ပါရှိသည့် အမည်အပြည့်အစုံ …၊ စသည်တို့ကို ပေးပို့ပြီး မေးမြန်းနိုင်သည်။
(၄) နာမည်စစ်ဆေးပေးခြင်း နှင့် နာမည်အရ ပြုအပ်သော သဘာဝယတြာပေးခြင်း … …… နှစ်သောင်းကျပ်
မိမိတို့မှည့်ခေါ်ထားသည့် နာမည်သည် မဟာဘုတ်ဗေဒင်ပညာအရ သင့်/မသင့် ၊ ဆိုးရွားသော အနေအထားများမှ ကင်းလွတ်ခြင်း ရှိ/မရှိ ၊ လက်ရှိသုံးစွဲနေသော အမည်မှ ပေးသည့် အကျိုးအပြစ် အာနိသင် နှင့် အားနဲချက် အားသာချက်များ ၊ နာမည်အရ ပြုထိုက်သော သဘာဝယတြာများ ..စသည်တို့ကို တွက်စစ်လမ်းညွှန်ပေးအပ်ပါသည်။
မူလမဟာဘုတ်ဇာတာအရ တစ်သက်တာလုံး ခံစားရမည့် ကံဇာတာ …..
အမည်စစ်ဆေးပေးခြင်း နှင့် သဘာဝယတြာပေးခြင်း
လက်ရှိအသက်ပိုင်းအရ ဂြိုဟ်အိပ်ကာလ ဖြတ်သန်းမှု အကျိုးအပြစ်
လက်ရှိအသက်ပိုင်းအရ ကံဇာတာအခြေအနေ နှင့် ဆောင်အပ်ရှောင်အပ်သည်များ ….
အစရှိသော အချက်အလက်များကို ရေးသားဖော်ပြပေးအပ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည့် သူ၏ မူလဇာတာ ၊ လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား သဘာဝ ၊ လုပ်ငန်းစတင်မည့် ကောဇာခုနှစ် အချိန် ..စသည်တို့ကို ကိုက်ညှိ စစ်ဆေးပြီး မှ သင့်လျော်သော အမည်အမျိုးအစား တို့ကို ရွေးထုတ်အကြံပြုပေးပါသည်။ မိမိတို့လုပ်ငန်းနာမည်ကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးခြယ် နိုင်စေရန် ..မှည့်ခေါ်နိုင်သော လမ်းကြောင်းများကို ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပြီး ……လုပ်ငန်းစတင်သင့်ချိန် ၊ နေ့ရက် ၊ နာရီ ၊ လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသင့်သော လိုဂိုအမှတ်အသားတစ်စုံတစ်ရာ ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်းဘုတ် ၊ လိပ်စာကဒ်စသည်တို့တွင် အသုံးပြုသင့်သော အရောင်များ …စသည်တို့ကို တွက်စစ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
မေးမြန်းလိုသူများ အသုံးပြုနိုင်သော ဥာဏ်ပူဇော်ခလွှဲပို့နိုင်သည့် လမ်းကြောင်းများ
ပြည်တွင်းမှ ဖြစ်ပါက ….. ကိုစိုးမိုးထွန်း
နိုင်ငံသားအမှတ် ၉/၀တန (နိုင်) ၁၀၄၈၆၅
phone / 01 – 618 469
အင်းစိန်ရိုးမဘဏ် ၊ မြေနီကုန်း ကမ္ဘောဇ ဘဏ် များသို့ လွှဲပို့ မေးမြန်းနိုင်သည်။
ပြည်ပမှဖြစ်ပါက ……. POSB saving 171-53132-2
Paypal account ; channyeintun.htoo13@gmail.com
စသည့် အကောင့်များကို အသုံးပြုပြီး ဥာဏ်ပူဇော်ခပေးပို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အပ္ပမာဒေါစ ဓမ္မေသု ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ ..။
Posted by Sayarphone at 1:41 PM Labels: ဗေဒင်မေးကြမယ်ဆိုရင်